Operation Field Counsellor | ABC Convenience Store ﻿
Operation Field Counsellor
3.7.2019, Full time , Retail / Wholesale
•	Must be able to understand how to read the financial statements to plan for improvement.
•	Must have strong personality and effective communication skills
•	Age between 30 to 40
•	Must beaUniversity Graduate,B.com,B.B.A,B.Ecom ,and MBA Degree holder would be an advantage.
Work location အမှတ် (၁၁)၊ (၆) လမ်း၊(၈)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပစက်မှုဇုန်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
Company Industry: Operation Field Counsellor
•	သကျဆိုငျရာမွို့နယျမြားနှငျ့ နယျခရီးသှားလာနိုငျရမညျ။ •	English 4skill ကြှမျးကငျြပွီး MS Office ကြှမျးကငျြစှာအသုံးပွုနိုငျရမညျ။
•	Sale Team အားဦးဆောငျနိုငျပွီး Sale Target ပွညျ့မှီအောငျစှမျးဆောငျနိုငျရမညျ။ •	Computer Microsoft Office ကြှမျးကငျြစှာအသုံးပွုနိုငျရမညျ။
•	သကျဆိုငျရာမွို့နယျမြားနှငျ့ နယျခရီးသှားလာနိုငျရမညျ။ •	MS Office ကြှမျးကငျြစှာအသုံးပွုနိုငျရမညျ။
•	English 4skill ကြှမျးကငျြပွီး MS Office ကြှမျးကငျြစှာအသုံးပွုနိုငျရမညျ။
•	Must be expert in Excel skill. •	Must have extensive experience in inventory and auditing together with expensive of grounds stock taking. •	Experience in retail industry could be an advantage. •	Inventory Audit (Report to CFO)
•	ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ •	လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိ်ုင်သည်။ •	abc မှချမှတ်ထားသောအလုပ်ချိန်အတွင်း အဆိုင်း (၃)ဆိ်ုင်း ...
•	Microsoft Office ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	Report to CFO
•	Must be able to lead Store Cashiers & Operators of own shop •	Must be able to learn & manage the whole store operation process of peple,Cash, inventory ,Store display and Store display and Store standard. •	Must have strong personality and effective communication skills
•	Must be able to understand how to read the financial statements to plan for improvement. •	Must have strong personality and effective communication skills
•	Must be able to work under stress,must have been well knowledge regarding with Electrical/mechanical/Chiller,Freezer ,Cancooler,Air con maintenance,Generator maintenance and General maintenance. •	Must have managerial skills and ability to lead team effectively •	Must be able to work with rotate shift if needed
•	Good personality and communication skill. •	Must be able to any three shit.
•	လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ မရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ •	ABC မှ ချမှတ်ထားသော အလုပ်ချိန်အတွင်းအဆိုင်း(၃)ဆိုင်းတွင်မည်သည့်အဆိုင်း မဆိုလုပ် ကိုင်နိုင်� ...
•	လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	ABC မှ ချမှတ်ထားသော အလုပ်ချိန်အတွင်းအဆိုင်း(၃)ဆိုင်းတွင် မည်သည့်အဆိုင်းမဆို လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•	ABC မှ ချမှတ်ထားသော အလုပ်ချိန်အတွင်းအဆိုင်း(၃)ဆိုင်းတွင် မည်သည့်အဆိုင်းမဆို လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တ ရိုးသားကောင်းမွန်ပြီး၊လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဆိုင်များ၏ရောင်းအားငွေစာရင်း အရှုံးအမြတ် ပေါ်မူတည်ပြီးရောင်းအားတိုးတက်အောင်မြင် အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တ ရိုးသားကောင်းမွန်ပြီး၊လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Operation Field Counselor
Operation Field Counsellor Advisory Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon ABC Convenience Store Advisory Jobs Advisory Jobs Operation Field Counsellor Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Senior Office Staff (Operation) M/F (1 Posts)
Operation Staff (Events & Exhibitions) (Code--29537)
Magway Region 11 Days
Junior Operation Staff (Cinema)